Pr Andrianarisoa Ange : “Tsy nanavakavaka olona ny Pr Zafy Albert” | NewsMada
Pr Andrianarisoa Ange : “Tsy nanavakavaka olona ny Pr Zafy Albert”
“Tiany ny asany, ary tsy nanavakavaka olona izy fa mitovy avokoa izay marary teo aminy. Amin’izany toe-panahiny izany: toy ny lefona tsara varombo izy, atomboka tsy mba milefitra. Natokany ho an’ny marary ny ampahan’ny fotoan’ny Pr Zafy Albert.”
Io no nambaran’ny avy amin’ny mpampianatra mpikaroka niara-niasa tamin’ny Pr Zafy Albert tao amin’ny fakiolite fitsaboana ny Pr Andrianarisoa Ange, oniversite Antananarivo, tamin’ny filazalazana ny momba azy tamin’ny fanaovam-beloma teny amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena, Mahamasina, omaly.
Nanatanteraka ny andraikiny amin’ny maha filohan’ny Repoblika azy izy, nataony izany tamin’ny fitetezana an’i Madagasikara tamin’ny fiarakodia. Nandritra ireny fotoana ireny, nandidy sy nampiteraka ny olona nila an’izany izy. Hainy koa ny nampita ny fahaizany ho an’ireo mpianatra teo ambany fiahiany.
Mitovy ny marary eo anoloan’ny aretina
“Amin’ny maha mpampianatra mpikaroka azy, zavatra telo no singaninay amin’ny zavatra tsara marobe nanehoany izany toe-piainany izany: fahazotoana mianatra, fomba fampianarana hentitra nefa fitsarana marina, mitovy ny marary eo anoloan’ny aretina”, hoy ny Pr Andrianarisoa Ange momba azy.
Anisan’ny mpiara-miasa akaiky tamin’ny profesora frantsay fanta-daza, ny Pr Cabrol, izy, teo amin’ny fandidiana sy famindrana fo. Tsy mba nentiny nirehareha ny mari-pahaizana ambony nananany, fa nampihariny ny velirano nataony teo anoloan’ny sarin’i Hippocrate hoe: “Manome toky sy mianiana aho hanaja lalandava ny etika hitandroana ny voninahitra sy ny fahamarinana eo am-panatontosana ny raharaha”.
“Tsy maty akory ianao fa matory. Tsy afaka ato am-ponay ianao sy ny fampitanao fahaizana taminay”, hoy ihany izy. Toetra fakan-tahaka izany, ka tsy hadino. Ny fitsaboana, ny fahaiza-mampianatra, ny fanajana marary, natao antoka lehibe teo amin’ny raharaha fitsaboana. Tsy teny fotsiny ihany fa tena niainany tokoa.